कस्तो क्यान्सरमा रेडियोथेरापी दिने ? • nepalhealthnews.com
डा. गिसुपनिख प्रसिको, सिनियर कन्सल्टेन्ट / रेडिएसन अंकोलोजिष्ट/ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल || प्रकाशित मिति :2019-02-15 10:34:37
करिब ७० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीहरुलाई कुनै न कुनै समयमा रेडियोथेरापीको जरुरत पर्छ । ३० प्रतिशतलाई रेडियोथेरापीको जरुरत पर्दैन । धेरैजसो ब्लड क्यान्सरमा किमो थेरापीको जरुरत परेपनि कुनैकुनै ब्लड क्यान्सरमा रेडियो थेरापी दिनुपर्छ । क्यान्सरका कारण भएको दुखाई कम गर्न रेडियोथेरापी दिनुपर्छ । यद्यपी क्यान्सर निको पार्न सकिने र नसकिने दुवै अवस्थामा रेडियोथेरापी दिनुपर्छ ।
‘मुख र घाँटीमा रेडियोथेरापी दिइएको अवस्थामा खाना निल्न गाह्रो हुने, टाउकोमा दिँदा टाउको दुख्ने र बान्ता आउन सक्छ आदि । तर यस किसिमका समस्या केही समयका लागि मात्र हुन्छ । बिरामी आत्तिनुपर्दैन ।
पाठेघर र स्तनको क्यान्सर रोकथाम समेत गर्न सकिन्छ । यस्ता क्यान्सरमा लक्षण चाँडै देखिन्छ । अरु क्यान्सर भन्दा डायग्नोसिस गर्न पनि सजिलो छ । प्याँक्रियाज क्यान्सरमा लक्षण ढिलो देखिने कारण पत्ता लगाउन गारो पर्छ ।